गाडीमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ भने अपनाउनुहोस् यस्ता उपायहरु « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १८:१६
सवारी साधन खासगरि बसमा यात्रा गर्दा रिंगटा लाग्ने र बान्ता हुने समस्या धेरै मानिसहरुको हुने गर्छ । कतिपय मानिस त झन् वान्ता भएकै कारण बिरामीसमेत हुन्छन् ।
कोही मानिसमा यात्रामा निस्कन साथ वान्ता गर्न थााल्छन् भने कसैकसैलाई लामो यात्रा गर्दा यो समस्या देखा पर्छ । वान्ता हुनु आफैंमा एक कष्टकर क्षण हो ।
शरीरलाई कमजोर बनाउनुका साथै यस्तो समस्याले यात्राको रमाइलोपन समेत हराएर जान्छ तर यो समस्याको पनि समाधान छ ।
मोसन सिकनेस पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ। तर यो समस्यालाई घरेलु उपायबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ । हेर्नुहोस् हाम्रै घर भान्सामा प्रयोग हुने केही प्रभावकारी घरेलु उपाय र औषधीय गुणयुक्त जडिबुटी जसले बान्ता हुनबाट बचाउँछ ।
प्रकाशित मिति: २६ भाद्र २०७६, बिहीबार १८:१६
जान्नुहोस् ! यस्ता छन् श्रीमतीलाई खुशी पार्ने उपायहरु
अहिलेको बर्तमान समयमा विवाह कमजोर पर्दै गइरहेको छ । पहिला विवालाई एक जीवनको दरिलो आधार
जान्नुहोस् ! पाचन प्रणाली कसरी रामो बनाउने ?
अहिलेको आधुनिकतासँगै मानिसको चालचलन तथा खानपिनमा परिर्वतन भइरहेको छ । त्यसकारण मानिसको स्वास्थ्यमा धेरै समस्याहरु